DEG DEG: Farmaajo iyo Kheyre oo Go’aan kama dambeys ah ka soo saaraya Xadgudubka Kenya iyo Axmed Madoobe oo Naxsan - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada DEG DEG: Farmaajo iyo Kheyre oo Go’aan kama dambeys ah ka soo...
DEG DEG: Farmaajo iyo Kheyre oo Go’aan kama dambeys ah ka soo saaraya Xadgudubka Kenya iyo Axmed Madoobe oo Naxsan
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisal wasaare Kheyre oo xalay kulan gaar ah ku yeeshay madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hadlay dhaq dhaqaaqa Kenya iyo Soomaaliya iyo xadgudubyada ay geysanayaan.
Illo ku sugan madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in Labadan mas’uul ee dalka ugu sareysa ay ka wada hadleen sidii Jawaab ku haboon looga bixin lahaa xadgudubyada xargaha goostay ee Kenya ka geysaneyso Soomaaliya.
Waxayna go’aan ku gaareen in dacwad kama dambeys ah oo wax kasta ku cad looga gudbin lahaa Qaramada Midoobay si loo siiyo digniintii kama dambeysta ahayd ee ku aadan iney ilaaliyaan Qarannimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya.
Kenya ayaa burisay amar ka soo baxay Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ku saabsan dhanka duulimaadyada ka dib markii Wafdi ka socda Dowladda Kenya ay amar la’aan ka degeen magaalada Kismaayo kana qeyb galeen xafladda caleema saarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa billihii ugu dambeeyay sii xumaanayay ka dib markii Kenya ay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo wax u dhimaya qaranimada dalka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa diiday iney aqoonsato doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee uu ku soo baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe,taasi oo dhalisay natiijada saddex madaxweyne oo jubbaland yeelato.